Home / Motivational Article
“Life has no meaning. Each of us has meaning and we bring it to life. It isawaste to be asking the question when you are the answer.” လိုက Joseph Campbell ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ ရှင်သန်နေထိုင်တဲ့ ဘဝရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ ဘာများလဲဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်မိတယ်ဆိုရင် အဖြေက သင်ကိုယ်တိုင်ပဲလို့ ဆိုရမှာပါ။ ကိုယ်က ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်နေချင်သလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူရမှာပါ။ ဘဝဆိုတာ စာအုပ်တစ်အုပ်ဆိုရင် အခန်းဆက်တိုင်းမှာ ဘာများဖြစ်နိုင်မလဲဆိုပြီး ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုနေရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ရေးသားယူရမှာပါ။
ကိုယ်ကိုယ်ကို ဒီမေးခွန်းတွေ မေးကြည့်ဖူုးလား
“Life is an endless process of self-discovery.” ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။ဘဝဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှာဖွေရင်း အကောင်းဆုံး Version တစ်ခု ဖြစ်လာအောင် ပြုပြင် ကြိုးစားယူရခြင်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သတိမထားမိပေမယ့် Personal Development တိုင်းက Self Discovery ကနေ စတင်ကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တခါတရံမှာ ကျွန်တော်တို့အများစုက ကိုယ့်အိပ်မက်တွေကို ရှာဖွေနေရင်းနဲ့ကို လမ်းပျောက်သွားတတ်တယ်။ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ပျောက်ဆုံးသွားတယ်၊ ကြိုးစားသင်ယူလိုစိတ်တွေ ပျောက်ဆုံးတယ်။ နောက်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါ ပျောက်ဆုံးသွားလေ့ရှိကြတယ်။ အလွယ်ကူဆုံးပြောရရင် ကိုယ်တိုင် ဘာဖြစ်ချင်မှန်းမသိ လမ်းပျောက်သွားတတ်ကြတယ်ပေါ့။